musha More Formula One Drivers Bio Nicholas Latifi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Nicholas Latifi Biography inoratidza chokwadi nezve yake Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Marilena naMichael Latifi), Musikana (Sandra Dziwiszek).
Moreso, Hama dzaNicholas Latifi (Michael naMatthew Latifi) uye Hanzvadzi yake (Soph Latifi). Zvakare Vehukama, Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro, Mabvumirano uye mambure akakosha.
Ichi chinyorwa chinokushandira iwe maonero akafara eHupenyu nhoroondo yaNicholas Latifi. Chinyorwa chedu chinovamba kubva panguva yokusvika kwake pasi pano.
Zvakare, kusvika panguva ino, akaenda pasi rose. Zvakare, isu tinomuziva nekukwikwidza muFormula One yeWilliams pasi pemureza weCanada.
Kukurudzira kuda kwako bio yedu, heino mifananidzo yaNicholas Latifi. Chokwadi, pfuti inopfupikisa Nyaya yake Yehudiki uye Biography chokwadi kubva pakuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Nicholas Latifi Biography - Tarisa hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika pakusimuka kwake mukurumbira.
Ndiye wechi15 mutyairi weCanada kutora chikamu muGrand Prix. Nicholas Latifi ndiye zvakare wechi2 kuigadzira kuburikidza neFormula One mushure Lance Kufamba.
Zvisinei, kune zvakawanda kuna Latifi kupfuura izvo zvinosangana neziso. Naizvozvo, zorora iwe uchiverenga kunonakidza kwechidimbu cheNicholas Latifi Biography uye nyaya yehudiki. Pasina kumwe kunonotsa, ngatipfuurirei.
Max Verstappen Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Nicholas Latifi Childhood Nyaya:
Nokuda kweBiography kutanga, Nicholas Daniel Latifi akaberekwa musi we 29th waJune 1995. Akasvika pasi pano musi weChina anofunga kuna Marilena Latifi nababa vake, Michael Latifi.
Nicholas Latifi akaberekerwa muguta rine vanhu vakawanda mudunhu reCanada reQuebec, rinonzi Montreal. Mutambi akauya munyika pakati pehama dzake, Michael naMateo Latifi.
Pamwe chete neHanzvadzi yake, Soph Latifi. Nicholas Latifi nevanin'ina vake vese vanobva kumubatanidzwa wevabereki vavo (Marilena naMichael Latifi), vane mapikicha atakaratidza pano.
Tarira Vabereki vaNicholas Latifi - Amai, Marilena Latifi (nee Russo) uye Baba, Michael Mehrdad Latifi.
Nicholas Latifi akapedza huduku hwake hwose muCanada. Akakurira kuNorth York, dunhu muToronto. Vazhinji vatyairi veF1 vakatanga karting vachiri 4.
Vashomanana vakatanga kuratidza matarenda kare 2. Zvisinei, Montreal-akaberekwa ane nyaya yakasiyana. Akatanga kuona karting sechinhu chinovaraidza.
Latifi aive 12 paakashuvira kuve mutyairi weFormula One. Zvechokwadi yaive nguva isina kujairika yekuda kuve F1 mujaho.
Zvakadaro, baba vaNicholas vakawana imwe yeshamwari dzavo, nyanzvi yemujaho, kuti aronge bvunzo dzepachivande dzaNicholas.
Mufananidzo wehuduku hwekutanga waNicholas Latifi.
Latifi akanga akadzikama asi akaratidza tarenda yakaisvonaka. Zvaishamisa. Asi zvakare, Latifi aifanira kunyengetedzwa kuti aedze nhangemutange yekart yakakodzera. Tinofungidzira kuti akatanga kutya. Nekudaro, paakangoedza karting, shungu dzake dzemujaho dzakasimba.
Paaive achiri kuyaruka, aive nenguva shoma yekukwezva kweKid. Naizvozvo, akanga ane nguva shoma yokuva neshamwari. Kupera kwevhiki kwaive kwemujaho, izvo, muchando, zvaireva kubhururuka kuenda kuFlorida. Kupera kwevhiki kwaive kwemujaho, izvo, muchando, zvaireva kubhururuka kuenda kuFlorida.
Nicholas Latifi Mhuri Background:
The Montrealer, Nicholas Daniel Latifi, ndiye mwana waMichael Latifi, muridzi webhizinesi. Mukuwedzera, Michael Latifi ndiye CEO weSofina Foods, Inc. Anewo British Virgin Islands Company inozivikanwa seNidala.
Zvichakadaro, amai vaNicholas, Marilena, mwanasikana webhirioni bhizinesi mogul. Baba vaMarilena ndivo mutsigiri weCanada inogadzira chizi yeSaputo Inc. Ndiye mumwe wevanhu vakapfuma muCanada.
Maererano ne Forbes, ane mari inotarisirwa yeUS $ 5.4 mabhiriyoni kubva munaNovember 2021. Sezvo akadaro, Nicholas Latifi ndewemhuri yakapfuma.
Vaigona kuwana uye kurarama upenyu hwomutambarakede. Kunze kwezvo, zvinoda mari yakawanda kupinda mumutambo wemijaho.
Nicholas Latifi ndewemhuri yakapfuma.
Nicholas Latifi Mhuri Mavambo:
Dzidzi remuMontreal-akaberekerwa F1 mujaho inonakidza kuverenga. Kuti tizive midzi yemhuri yake, taizoparadza muzukuru wake mumwe nomumwe. Mumwe aibva kudivi raamai vake mumwe ari kuna baba vake.
Paternally, Nicholas Latifi ane Persian Canadian madzitateguru, kana anonzi nevamwe Iranian-Canadian. Sekuru vake mugari weCanada ane nyika yeIran. Saizvozvo, baba vake chizvarwa cheToronto.
Amai, Nicholas Latifi anobva kuItaly-Canada. Vabereki vaamai vake ndevekuCanada vane nhaka yeItaly asi kubva kuchitsuwa cheSicily.
Vanasekuru nambuya vaNicholas vakatama kubva kuSicily kuenda kuCanada mukupera kwema1950.
Uyezve, tinoziva kuti Montreal iguta rine mitauro miviri. Vazhinji vekuCanada vanotaura chiFrench kana Chirungu. Zvakadaro, isu tinotarisira kuti Nicholas anotaura mitauro yeIranian neItalian, kunze kweChirungu neFrench.
Zvakare, zita reimba yake, Latifi, nderechiAlbania. Kusvika pari zvino, surname yake yave nemhando dzakasiyana. Zita rokuti Latifi rinoreva munhu ane Mutsa kana munyoro. Pane mukana wekuti madzitateguru ake akatanga kubva kuAlbania asati atamira kuIran.
Naizvozvo, mukupedzisa Nicholas Latifi Family Origin, tinofungidzira kuti F1 racer ndeyemarudzi akasanganiswa. Nicholas Latifi mumhanyi weCanada-Iranian-Italian. Moreso, pamwe mukwikwidzi wemitambo weAlbania.
Zvakawanda, kunyangwe akaberekerwa kuMontreal, iye chizvarwa cheToronto, kuCanada. Kutevera chikamu ichi chebiography yedu inomiririra yemifananidzo yemhuri yaNicholas Latifi.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaNicholas Latifi.
Nicholas Latifi Dzidzo:
Latifi akakurira muNorth York uye akapinda Chikoro cheCrescent, sehanzvadzi yake Matthew. Chikoro ichi Chikoro chevakomana chakazvimirira muToronto. Nicholas akatanga paCrescent School muGrade 3 asati atanga mijaho yego-karts aine makore gumi nematatu.
Zvisinei, purogiramu yaLatifi yakasimba yekudzidzira yaireva kuti zvizhinji zvechikoro chake chesekondari chakaitika mumugwagwa.
Ndiye piyona wekudzidza ari kure muchikoro chake. Latifi akapedza makore mapfumbamwe ari kuchikoro che crescent. Ipapo, akapfuurira kumujaho wenyanzvi.
Mutyairi weFormula One Nicholas Latifi akapinzwa muCrescent School's Alumni Hall of Honour. Nicholas ndiye wechigumi nematanhatu alumnus kushongedza Rusvingo rweKukudzwa. Chiitiko ichi chakaitika musi wa19 Gumiguru 2021.
Nicholas akatanga paCrescent School muGrade 3 asati atanga mijaho yego-karts aine makore gumi nematatu.
Nicholas Latifi Ekutanga Basa:
Latifi aigara achifunga kuti aizotevera baba vake munyika yebhizimisi. Zvakangodaro, karting yehudiki uye nzendo kuenda kuCanada Grand Prix yakagadzira yake Formula One racing hope. Asi zvino, kudzingirira kurota uku kwaireva kubva pamba kunokwikwidza kuEurope.
Mutori wenhau weToronto akatanga kumhanya kart aine makore 13. Mukomana wechidiki uyu akapedza ari mumhanyi mukirasi yeRotax Junior yeCanadian National Karting Championship.
Latifi akaenderera mberi achikwikwidza muCanada neAmerica karting series kusvikira 2012. Akakunda Florida Winter Tour Championship mukirasi yeRotax DD2. Kubva ipapo, akakurumidza kuenda kuFormula 3 mujaho.
Nicholas akakunda iyo Florida Winter Tour Championship mukirasi yeRotax DD2.
Nicholas Latifi Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
Muna 2014, akatarisana nemwaka wese muEuropean Formula 3 nechikwata chePrema Power, achiwana chikuva kuSilverstone.
Gare gare muna 2014, akakwikwidza mune mamwe marounds eFormula Renault 3.5 kuronga neTech 1 Racing.
Akazoonekwa mukirasi yeShifter ROK yeFlorida Winter Tour muna 2015. Akakwikwidzana nevaimbove vatyairi veFormula One Rubens Barrichello naNelson Piquet Jr.
Ipapo, akave nekukasira uye akatora nzvimbo yegumi neimwe muFormula Renault 3.5 Series zita.
Muna 2016, Renault's Formula One timu yakahaya Latifi semutyairi webvunzo. Zvichienderera mberi, muna 2019, Latifi akabva awana nzvimbo yechipiri mumakwikwi eFIA Formula 2.
Latifi akawana nzvimbo yechipiri mumakwikwi eFIA Formula 2.
Nicholas Latifi Biography - Nyaya yekubudirira:
Kusvika 2019, Nicholas aive chikamu cheFormula mbiri makwikwi uye GP 2 akatevedzana. Mwaka wa2020 wakaita gore guru kwaari apo vakamukudza kuve chikamu chechikwata chemijaho chaWilliams mumujaho une mukurumbira weFormula one.
Nicholas akatsiva Robert Kubica. Akazobatana neaimbova mukwikwidzi weFormula 2 George Russell.
Mushure mezvo, mujaho ane tarenda akaita fomu rake rekutanga pa2020 Austrian Grand Prix. Ona zvakaitika kuseri kwechiitiko panguva yake yeF1 yekutanga muAustria.
Williams Racing akachengeta Latifi pamwe chete naGeorge Russell nokuda kwe2021. Akawana basa rake-yakanakisisa nzvimbo yekukodzera nenzvimbo ye14 paEmilia Romagna Grand Prix.
Nicholas haana kupedza mujaho mushure mekudhumhana naNikita Mazepin.
Kwemwaka wa2022, Latifi anofanirwa kugara naWilliams. Kugara kwake kuri padivi pemutambi mutsva, aimbove mutyairi weRed Bull Racing Alex Albon.
Heino chidimbu chinopfupikisa kusimuka kunoshamisa kwaNicholas kuita mukurumbira.
Nezve Sandra Dziwiszek - Musikana waNicholas Latifi:
Formula one yakaratidza mutambo une chirongwa chinoda. Zvakadaro, zvinoshamisa kuti vangani vevatyairi vanowana rudo rwehupenyu hwavo.
Kuve munhu akazvimiririra, Nicholas akachengeta hupenyu hwake hwepamhepo kubva pachitarisiko, kunyanya hukama hwehukama.
Nekudaro, Nicholas Latifi ari murudo nemhando yePolish, Sandra Dziwiszek. Tinotenda kuti vaviri ava vakaungana muna Chikumi 2020.
Asi pane zvese izvo, mitambo yakamanikidza Nicholas kupotsa zuva rekuzvarwa kwake munaKurume 2021. Akanga achikwikwidza mukutanga kwemwaka. Moreso, Sandra Dziwiszek ane CV inoshamisa.
Nicholas Latifi ari murudo nemuenzaniso wekuPoland, Sandra Dziwiszek.
Zvimwe nezveMusikana waNicholas Latifi - Sandra Dziwiszek:
Akazvarwa muPoland asi akakurira muPortugal nguva zhinji yehupenyu hwake. Sandra Dziwiszek muenzaniso, anoshandira Pop Models Milano, sangano reItaly.
Uyezve, handiko kwaanonyanya kurarama. Basa rake guru ragara riri gweta.
Akawana dhigirii rake remutemo uye master of law muLondon. Uyezve, Sandra akatanga basa rake rekuenzanisira muna 2014.
Kubva ipapo akamodhera makambani mazhinji emarudzi akawanda. Sandra modhi yeVogue, London Fashion Week, Puma, uye WakeUp Cosmetics.
Latifi ari pazororo, nemusikana wake, Sandra.
Kunze kwekuve barrister uye modhi, Sandra ari zvakare nyanzvi Pole Vaulter. Iye munhu wemitambo kuburikidza uye kuburikidza, zvakanyanya semumwe wake, Nicholas.
Chikamu chinonakidza nezvenyaya yavo ndechekuti anoda mota uye anga ari muteveri anoshingaira wemujaho wemota.
Kuda kwake mota kunoratidza kuti sei Sandra aigara achiratidzira paddock pakupera kwevhiki akati wandei. Kushanya kwazvino kwakange kuri kuHungary Grand Prix 2021, yakazova svondo rekupemberera.
Chikamu chinonakidza nezvenyaya yavo ndechekuti anoda mota uye muteveri wemujaho wemota.
Nicholas Latifi Hupenyu hweMhuri:
Panguva ino mune yedu biography, ngatitaure nezve nhengo yega yega yeimba yaNicholas Latifi.
Zvamazvirokwazvo, angadai asina kubudirira pasina tsigiro yakasimba yeimba yake yakapfuma. Chisungo mukati memba chakamubatsira kuti ave F1 nyeredzi yaari nhasi.
Mufananidzo unopenga waNicholas Latifi uye nhengo dzemhuri.
Nezve Nicholas Latifi Baba - Michael Mehrdad Latifi:
Baba vaNicholas ndiMichael Mehrdad Latifi. Iye muridzi weIran-Canada bhizinesi. Moreso, Michael Latifi akaberekwa muna 1962 muIran.
Ndiye muridzi uye CEO weSofina Foods Inc. Micheal ndiMarkham, Ontario-based mugadziri wezvigadzirwa zvemhuka zvakagadziriswa.
Kusvika ikozvino, Micheal Latifi ane rekodhi rakabudirira rakabudirira mubhizinesi. Kambani yake, Sofina, yakawana Lilydale neSanta Maria Foods ULC, mutengesi. Moreso, akawana muparidzi wemhando dzemhando dzeItaly mu2012.
Kuburikidza nekambani yekudyara Nidala (BVI) Limited, inodzorwa naLatifi, akaisa mari inosvika 270 miriyoni USD muMcLaren Group.
Baba vaNicholas, Michael Mehrdad Latifi muridzi webhizinesi reIran-Canada.
Baba vaLance Stroll, Lawrence, havasirivo vega baba vekuCanada vane bhirioni vari kutamba chikamu chakakosha mubasa remwanakomana wavo F1. Michael Mehrdad Latifi akatevera. Kambani yake, Sofina Foods, inotsigira Williams Racing Team.
Kunyange zvazvo Baba vaNicholas vakafunga kuti mwanakomana wavo ave bhizinesi saiye, pamwe chete nemudzimai wake, Marilena Latifi, vave vachimutsigira pamatanho ose ebasa rake.
Micheal Latifi ave achimutsigira pamatanho ese ebasa rake.
Nezve Nicholas Latifi Amai - Maria Helena Latifi (nee Russo):
Amai vaNicholas Latifi ndiMarilena Helena Latifi (nee Russo). Hapana mubvunzo kuti Nicholas Latifi anoda sei amai vake. Kusvika parizvino anakidzwa nerudo rwake, rutsigiro uye kutarisirwa kwaamai mumakore ake ekukura.
Marilena Latifi mudzimai weIranian-Canadian business executive, Michael Latifi. Vave vakaroorana kweanopfuura makore makumi maviri. Mukuwedzera, kubatana kwavo kwakabereka vana vatatu; Michela Mudiki, Nicholas naMateo.
Marilena nemurume wake, Michael Latifi, vatsigiri veSunnybrook vepagore kuburikidza neSofina yavo yegore negore Amici Golf Classic. Vaviri ava vakatanga mutambo uyu muna 2008 kutsigira Sunnybrook's Women & Babies Chirongwa.
Nezve Nicholas Latifi Mukoma - Matthew Latifi:
Mukoma waNicholas mukuru ndiMatthew Latifi. Matthew anoshanda senhengo yeSofina Foods Drivers' Development Program. Chirongwa ichi chine chinangwa chekubatsira vekuCanada karting vasina ruzivo vatyairi.
Iyo Sofina Chikafu Vatyairi' Development inotsigirawo vatyairi veCanada kuti vasvike padanho repasi rose motorsports. Matthew Latifi akatora chikamu muKarting zvishoma pamberi pake kudzokera kuHupenyu Hwakakwana. Zvakanakisa zveKarting yake zvinotevera munguva pfupi.
Akabuda 3rd muFlorida Winter Tour - Junior ROK (2016) uye wechipiri muFlorida Winter Tour - Rotax Mini Max (2).
Pamusoro pezvo, akave wechi3rd muFlorida Winter Tour - Mini ROK (2015) uyezve, 2nd Canadian National Karting Championships (2013). Zvakare, Latifi akawana 1st chinzvimbo kuCanadian National Karting Championships - Rotax Micro Max.
Nezve Nicholas Latifi Mukoma - Michael Alexander Latifi Jr.:
Nicholas 'mukoma wekupedzisira ndiMichael Alexander Latifi Jr. Akazvarwa musi we 10th waFebruary 2001. Michael Alexander Latifi mujaho weJunior. Muna 2014, Michael Latifi akasaina marathon yake yekutanga.
Kufanana nemukoma wake, vanomutsoropodza nekuda kwekutenga zvigaro zvakagadzirirwa vamwe vakwikwi vemitambo. Zvakadaro, ane tarenda uye akahwina 2 mijaho.
Uyezve, Michael Jr. paakazvarwa muMontreal, aifanira kugara muincubator kwemazuva. Kugara kwacho kwaive nekuda kwekunetseka kwekushanda kwenguva refu.
Chiitiko ichi chakafuridzira vabereki vake kumisa hwaro hwekubatsira vana vari mumamiriro akafanana. Pamusoro pezvo, chirongwa cheSunnybrook's Family Navigation chinobatsira vanhu kupora kubva mukuora mwoyo.
Michael Mudiki aive zvakare ruzivo rwavo rwekutanga nekurudziro. Michael Jr. zvino anotaura kuzvikoro uye vanounganidza mari uye, mukuita kudaro, anokurudzira vamwe kuti vasvike.
Nezve Nicholas Latifi Sista - Soph Latifi:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Nicholas Latifi, ane Hanzvadzi chete. Nicholas neHanzvadzi yake yechidiki, Soph Latifi, vanogoverana chisungo chepedyo. Zvakadaro, aipinda Chikoro chakasiyana chakazvimiririra kubva kuVakomana vemba.
Asi ipapo, akadzidzirawo muToronto. Soph Latifi anofarira zvemitambo sehama dzake. Saka nekudaro, anomutsigira panguva yemakwikwi ake.
Nezve Nicholas Latifi Hama:
Mutyairi weCanadian-Iranian-Italian F1 anofanirwa kuve nehumwe hukama. Nicholas Latifi ane nhengo shoma dzemhuri kunze kwemhuri yake yenyukireya (baba, amai uye hanzvadzi nehanzvadzi). Sekudaro, ane vana babamunini, vanatete, nasekuru.
Zvisinei, pahama dzake dzose, taigona kungofanana nasekuru nasekuru vake. Vanasekuru vake vaBaba vake vaive Fatemeh naMohammad Bagher Latifi. Zvichakadaro, sekuru naambuya vake ndiNina naIsidoro Russo, zvichiteerana.
Uyezve, Nicholas aiva nababamunini ainzi Max Latifi. Mainini vake vaive Afschineh naAfsaneh Latifi. Humwe hukama huri kure hunosanganisira nhengo dzemhuri yeSaputo. Nhengo dzeSaputo dzinosanganisira Emanuele "Lino" Saputo, Giuseppe Saputo naMaria Saputo.
Hupenyu hweMunhu kure neMujaho:
Kunze kwekumhanya, mutyairi weCanada-Iranian-Italian F1 anofarira mafirimu, basketball, kutamba uye kutandara neshamwari. Kushanda chinhu chikuru. Anoita TRX training. Nicholas Latifi anodawo kuona mafirimu uye kuteerera mimhanzi (hip-hop, rap uye R'n'B).
Nicholas Latifi naGeorge Russell vachitonhorwa nevamwe vavo.
Drake ndiye nyeredzi yake yepamusoro yemimhanzi. Uyezve, munguva yake yekusununguka, anofarira kuenda Wake kusefa. Anoda imbwa semhuka dzinovaraidza. Naizvozvo, Nicholas ane zvidhori zviviri zvegoridhe. Vanonzi Simba naKenzo.
Parizvino, sekureva kwake mubvunzurudzo, kuzvidemba kwake kukuru kwaive kusiya chikoro kuti aite online homeschooling. Mukuona, angadai akapedza chikoro chesekondari achiri mujaho, kana zvichibvira.
Mutyairi weCanadian-Iranian-Italian F1 anofarira mafirimu, basketball, kutamba.
Nicholas Latifi anoshandisa mapuratifomu ake ezvekurapa kuchengetedza kuonana nevateveri vari kukura. Anowanzo taurira mhuri yake, shamwari uye hukama pane yake nguva. Yake Instagram account chete ine vanopfuura 310k vateveri.
Nicholas Latifi Mararamiro:
Mutyairi weF1 mudiki kusvika parizvino ave nekutanga kunoshamisa, kunyangwe akanonoka karting. Hapana mubvunzo kuti akazviwanira mamiriyoni emadhora. Kunze kwezvo, achiri mugari wenhaka wechigaro choumambo chedzinza rababa vake vakapfuma.
Panguva ino, Nicholas Latifi anogona kutenga chero chido chemoyo wake. Motokari yake yekutanga BMW M3. Nicholas Latifi nemhuri yake vane dzimba dzinoverengeka mukati nokunze kweCanada. Zvakadaro, pekugara kwavo kwekutanga, zvakadaro, muToronto, Ontario.
Collage yaNicholas Latifi Mota muunganidzwa.
Nicholas ari pakati pevatyairi vashoma vekuCanada kutora chikamu muGrand Prix. Iye ndiye wechipiri kuigadzira kuburikidza neformula yekutanga mushure meLance Stroll. Nekuda kwerutsigiro rwababa vake uye tsitsi kubasa rake, akaisa $2 miriyoni muMcLaren Group.
Uyezve, kukosha kwake, maererano nemitambo yakakosha, inenge mamiriyoni mashanu emadhora. Mari yake yegore negore semwaka wa5 muchikwata cheF2020 Williams i$1 miriyoni.
Anotungamira mutsigiri waLatifi ndiSofina Foods Inc, inogadzira chikafu chakavanzika. Zvinoshamisa zvakare kuti baba vake, Michael Latifi, ndiye CEO weSofina Foods. Nicholas akaita basa rekusimudzira kune akasiyana mhando, kusanganisira Infinity.
Mumwe mutsigiri mukuru iRoyal Bank yeCanada (RBC), rimwe remabhanga makuru pasi rose. Moreso, Lavazza, mumwe wevatambi vekofi vane mukurumbira pasi rose, anomutsigirawo.
Nicholas Latifi Untold Chokwadi:
Parizvino, Nicholas Latifi anozivikanwa zvakanyanya nekuita kwake ku2019 FIA Formula 2 Championship. Akabuda semumhanyi-mumhanyi mumakwikwi eFIA Formula 2 kumashure kwaNyck de Vries.
Mumakwikwi eFIA Formula 2, Nicholas Latifi akaita makundano matanhatu, mana acho achiuya muna 2019. Vamwe vaviri vaiva muna 2017 uye 2018, pamwe chete ne13 podiums. Chii chimwe? Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza zvimwe chokwadi nezve Montreal-akazvarwa F1 mujaho.
Nicholas anozivikanwa zvakanyanya nekuita kwake ku2019 FIA Formula 2 Championship.
Nheyo uye Basa reKupa:
Mutsigiri waLatifi, Sofina Foods, akatsigira kutanga kwa2008 kweChirongwa cheVakadzi neVacheche paSunnybrook Health Sciences Center. Mhuri yekwaLatifi yakagovera chiono cheSunnybrook pamusoro pekusimudzira kubatana kwevabereki kana vacheche vachida ma incubator.
Ivo zvakare vakatanga iyo Sofina & Amici Gorofu Classic muna 2008, mhuri-inoshamwaridzika gorofu nhangemutange yakasimudza anopfuura mamirioni mazana matatu emadhora.
Nicholas Latifi Chitendero:
Isu tinodaidza hukama pakati pemunhu neinodarika sosi yekukosha sechitendero. Mukuita, zvingasanganisira nzira dzakasiyana-siyana dzokukurukura, dzakadai seminyengetero kana kufungisisa. Zvitendero, kunyange zvazvo zvakasiyana, zvinowanzogoverana muitiro wezvitendero uye bumbiro retsika.
Kungofanana neruzhinji rwevanhu muCanada, Nicholas Latifi muKristu. Zvisinei, hatina kuona kusimba kwake kana kuti kushingaira kwake mukuita.
Helmet yaNicholas Latifi:
Latifi akamhanya neyakagadzika helmet dhizaini kubva kosi yake yejunior. Ngowani yake ine dhizaini yebhuruu, chena uye tsvuku kubva kumberi kuenda kumashure.
Pamusoro pengowani ine dhisiki dzvuku rinosanganisira Canadian maple leaf uye nhamba yake yekumhanya, iyo iri 6. Kumashure, yake pachake 'NL6' logo inoratidza.
Nicholas Latifi's 2021 Helmet pateni.
Nhamba yerudzi rwaLatifi:
Nhamba yerudzi rwaLatifi ndeye 6. Akasarudza nhamba yacho sechirevo chezita remadunhurirwa rekumusha kwake, Toronto. Nicholas Latifi akatanga apfeka nhamba yerookie yake mwaka.
Nhamba chaiyo yaakashandisa pamotokari yake yeDAMS F2. Chikonzero chake chikuru chekusarudza nhamba 6 ndechekuti vanhu vakanyatsobatanidza iyo digit neToronto. Anoda kumiririra imba yake kwese kwaanoenda.
Isu tinonyanya kuziva iyo FIA sedare rinotonga rezviitiko zvakawanda zvemujaho wemotokari, senge inozivikanwa Formula One. Nekubatana, Nicholas Latifi anomhanya pasi peCanada yenyika yemitambo chiremera (ASN Canada FIA).
Nekudaro, muna Zvita 2019, ASN Canada FIA yakasiya chigaro sedare reCanada remitambo muCanada. Naizvozvo, Latifi parizvino akamhanya pasi perezinesi reAmerica kubvira 2020, mushure mekunge chiremera chenyika cheCanada chemitambo chasiya basa rayo kubva kuFIA.
Nicholas Latifi Biography pfupiso:
Latifi akaratidza zviratidzo kuti anogona kuva mukwikwidzi weFormula One mune ramangwana. Kubva pamazuva ake ekarting, anogona kuzvirumbidza pamusoro pemikombe makumi maviri.
Sezvineiwo, kukurumidza kufenda kuburikidza naNicholas Latifi Biography uye Childhood Nyaya, tine zvese zvaunoda kuziva nezvake.
Ichi chikamu chichabata Nicholas Latifi bio, wiki, Zera, Birthday, Networth, Affairs, Height. Zvakare nehuremu hwake, dzinza, vabereki, Hanzvadzi, hama, Simuka mukurumbira uye nezvimwe zviri patafura inotevera.
Nicholas Latifi, kubva pamazuva ake ekarting, anogona kuzvirumbidza pamusoro pemikombe makumi maviri.
Zita rizere: Nicholas Daniel Latifi
Zuva rekuzvarwa: 29 Chikumi 1995
Age: (27 makore nemwedzi 0)
Nzvimbo yekuzvarirwa: Montreal, Quebec, Canada
Basa: Formula one racing driver
2021 timu: Williams-Mercedes
Nhamba yemotokari: 6
Mapinda: 36 (36 kutanga)
Dzidzo: Chikoro cheCresecent, Toronto, Ontario, Canada
Baba: Michael Mehrdad Latifi
Amai: Marilena Latifi (Nee Russo)
Hanzvadzi konama: Michael Alexander Latifi, Matthew Latifi
Sisters: Soph Latifi
Hama: Vanasekuru nasekuru (Fatemeh naMohammad Bagher Latifi), sekuru nasekuru (Nina naIsidoro Russo), Sekuru (Max Latifi) naAmainini (Afschineh uye
Musikana: Sandra Dziwiszek
Zuva Chikwangwani (Zodiac): kenza
Hobbies: Mabhaisikopo, Basketball, Mimhanzi, kutamba, kutandara neshamwari, maekisesaizi uye Wakesurfing.
kukwirira:	 6 ft 1 mu (1.86 m)
Dzinza / Race: Chena
Social Media: instagram(nicholaslatifi), twitter(NicholasLatifi), facebook.com(NicholasLatifi)
Sezvatinotenderedza Nicholas Latifi's Biography uye Childhood Hupenyu Nyaya, tinofungidzira kuti unogona kutora zvidzidzo zvishoma. Kutanga kwaNicholas kunonoka kwaive kukanganisa mukarting. Kunyanya zvakadaro muzvigaro-zvimwechete.
Enzaniso Latifi inogara ichishandisa ndeyekuti yekutanga karters (se Max Verstappen) dzidza kumhanya sekunge mutauro wavo wekutanga. Ukuwo, kunonyanya kuoma uye kunonokerwa pakudzidza unyanzvi uhwu pazera rinotevera, apo vamwe vanenge vagara vachitsetsenura.
Chaizvoizvo, Latifi akadzidza zvakawanda zvezvaanoita panzira kubva pamapepa. Anoshandisa dzidziso-yakavakirwa basa pane kukwidza mileage kubva paudiki kuti anzwisise kuomarara kwekutonga kwemotokari uye kunzwira tsitsi.
Nhasi, Nicholas Daniel Latifi anokwikwidza zvakanaka nevatambi veF1. Anokwikwidzana nevamhanyi vakatanga kumhanya 2. Naizvozvo; aingova nemakore matatu chete emakwikwi okuita karting. Ehe, akashandisa zvakanyanya mazuva ake mapfupi ekarting.
Tinovimba wakaverenga zvinonakidza mukati meBio nyaya yedu. Nyorera kune yedu Formula one Drivers 'Biography. Kurongeka uye mhando yepamusoro-soro ndiyo masiginecha edu.